पैदल यात्रु हिड्ने वा सबारी साधन सञ्चालन हुने कच्ची वा पिच सडकमा दैनिकीजस्तो जनताले हैरानी खेप्नुपरेको छ । उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको सडक पानी पर्दा हिलम्मे र घाम लाग्दा
पछिल्लो समय नेपालमा स्मार्टफोनको क्रेज बढ्दो क्रममा रहेको छ । अहिले धेरैको प्राथमिकतामा स्मार्टफोन पर्न थालेका छन् । यस्तोमा चाडबाड नजिकिँदै गर्दा स्मार्टफोनको बजारमा चपहपहल पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
नेपालीहरुको महान् चार्ड दशैं अब नेपालीहरुको घर घरमा आउँदैछ । विदेशिएका नेपाली दाजुभाईहरु दशैं मनाउन आफ्नो घर आउने क्रमम पनि जारी रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको २०५८ सालको जनगणनाअनुसार
परापूर्वकालदेखि मानिँदै आएको पर्व हो शैं । विशेष गरेर दशैंंलाई खुसीको पर्वको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । पुराना भनाइहरुलाई आधार मान्ने हो भने दशैंं असत्यमाथि सत्यको जीत नै हो र यसलाई दिवशको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
नेपाल हिन्दुहरुले भरिपूर्ण देश हो । नेपालमा अरु धर्मभन्दा हिन्दु धर्म मान्ने व्यक्तिहरुको बढी मात्रामा बसोबास रहेको छ । यसैगरी हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान् चाड दशैं नजिकिँदै आएको छ । दशैं जस्तो कमहत्वपूर्ण
पाँच करोडको विदेश भ्रमण ३५ लाख देखाइयो
औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रणः औचित्यहीन खर्च र अनावश्यकविदेश भ्रमण रोकिएका छन् । विदेश भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामुखी,मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुनदेखि असारसम्म वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयले मात्र २ करोड खर्च गरेको थियो । यो सरकार बनेपछि आर्थिक वर्ष
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण : एक लाखको बाटो ३० लाखको खर्च !
संविधानले कतै व्यवस्था गरेको छैन प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने । संसारभर यस्तो हुँदैन पनि । छिमेकी देश भारत नै २९ वटा प्रदेश भएको देश हो तर त्यहाँ कुनै आमसभाबाहेक प्रदेशसभालाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको छैन । नेपालमायस्तो प्रचलन सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको वैशाखयता चारवटा प्रदेशसभालाई सम्बोधन
लामो समयसम्म मुलुकको शासन सम्हालेको र राणा र राजतन्त्रको निरङ्कुशताविरुद्ध लडेको कांग्रेस आज आफ्नै पार्टीको निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्न परेको स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताले बताउन थालेका छन् । त्यस्तो गौरवमय इतिहास
एउटा सरकारी निकायअन्तर्गतकै संस्थानका जिम्मेवार कर्मचारीबाट गलत कार्य गरेपछि कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने गतिलो प्रमाण हालै भेटिएको छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा । सो संस्थाले नेपाली भाषा, कला, संस्कृति र अन्य
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पछिल्लो चरणमा दिनप्रतिदिन व्यापारीकरण भइरहेको छ । शिक्षालाई अहिले सेवामुखि नभई नाफामुखी क्षेत्रको रुपमा विकास गरिँदै लगेको अवस्था छ । सेवा दिने बाहानामा निमुखा जनताका
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ सांसदहरुको समर्थन छ । नेकपा एक्लैको पनि झण्डै दुई तिहाइ संख्या रहेको बेला संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा आएपछि दुई तिहाइको संख्या कटेको हो ।
जब सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यसको फाइदा भ्रष्टाचार र तस्करहरुलाई हुने गरेको छ । आम उपभोक्ता र जनतालाई सास्ती भोग्दै आएको छ । सत्तामा पुग्ने जो कोहीले पनि कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै भन्ने गर्दछन् अब देशमा आर्थिक क्रान्तिको विकल्प छैन ।
अहिले केपी ओलीको पार्टी र पुष्पकमल दाहालको पार्टीका साथै केही साना दलको मिलिजुलीमा सरकार चलाएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै आएका छन् । देशमा जहाँजहाँ जुन विभागबाट अत्यधिक मात्रामा पैसाको चलखेल हुन्छ, त्यो विभाग आफूमातहत राखेर मन्त्रालयलाई निष्क्रिय बनाए ।
वैदेशिक रोजगारीकै कारण खरका छानाहरुमा टिनको छानामा परिणत भएका छन् भने टिनका छानाहरु कंक्रिटको ढलानयुक्त घरमा परिणत भएका छन् । साइकल चढ्नेहरु मोटरसाइकल र स्कुटरमा बजार ढुल्ने हैसियत निर्माण गरेका छन् । अलि राम्रो कमाइ गर्नेहरुले सहरतिर चार आना घडेरी पनि जोडेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल संविधान कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढेको भन्दै छिमेकीको साथ आवश्यक भएको बताएका छन् । भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले नेपालको विकासका लागि छिमेकीको साथ सहयोग र साझेदारीको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
संविधानमा रहेको फलानो दफालाई हटाऊ र फलाने दफा थप भन्ने यो प्रतिवेदन आफैँमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित थियो÷थिएन भन्ने आफैँमा विवादित छ । निर्वाचन कसरी सम्पन्न भयो, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष भयो÷भएन भन्ने हेर्न आएको पर्यवेक्षण टोलीले खस आर्यलाई दिएको संरक्षण हटाउन र क्रिश्चियनलाई आरक्षण दिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिवेदनका अंश जो कोहीले पनि पढ्न सकिन्छ ।
देशका ठूलाबडाका सबै नक्कली सर्टिफिकेट ?
आजभोलि बच्चाहरुलाई पढ् भन्नु नै हुँदैन । पढ् भन्ने शब्द सुन्ने वित्तिकै प्रश्न गर्छन्  । यो देशका ठूलाबडाले नपढ्दा हुने अनि हामीले चाहिँ अब किन पढ्ने ? यस्तो प्रश्नको उत्तर आजसम्म दिन सकेको छैन । हुन पनि हो यो देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, कसैले पनि पूरा अध्ययन नगरेको समाचार बाहिरीएपछि त्यसको नराम्रो असर अहिले बच्चाहरुमा परेको छ ।